.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Mp3 သီချင်းများ ဒေါင်းရန် ၂
1 ပြည့်စုံလွန်း ဇော်ပိုင် Click Here 1.70 MB
2 ရှိသည် ဖြစ်သည် ချစ်သည် ချမ်းချမ်း Click Here 2.10 MB
3 နားလည်ပေးလှည့် Unknown Click Here 1.80 MB
4 Opp Gangnam Style Spy Click Here 1.90 MB
5 ပြန်ဆုံချိန် ထွဏ်းခမ် ၊ ဇမ်နူး Click Here 1.20 MB
6 လိုချင်တာအချစ် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
7 အမှတ်တရ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
8 ဘယ်တော့မှမဝေးဘူး အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
9 အိပ်မက်ဆိုလည်း အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
10 ရည်းစားစာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.00 MB
11 အရောင်မဆိုးနဲ့ Nine One - Ft နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
12 သူစိမ်း ဟန်ထူးလွင် Click Here 2.00 MB
13 အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ ဇင်မင်းခန့် ၊ ဒီယွန်းလေး Click Here 2.00 MB
14 တစ်စစီကျိူးပဲ့နေ ဗန်းသော့ဒ်ကျင်း Click Here 2.00 MB
15 စိုးရိမ်ချစ် နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
16 ငါဆက်ချစ်မယ့်သူ Xero Click Here 2.00 MB
17 အကြင်နာစစ်ရင် ဆုန်သင်းပါရ် Click Here 2.00 MB
18 မင်းအကြောင်းလေး စိုးသူ Click Here 2.00 MB
19 အဖြူသက်သက် L လွန်းဝါ Click Here 2.00 MB
20 ဝိရောဓိ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.00 MB
20 မိုင်တွေဝေး စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.00 MB
21 ကြယ်ကြွေကောင်းကင် စိုးဇော်ပိုင် Click Here 2.00 MB
22 တစ်ဖက်သတ်ရုပ်ရှင် ဒိုရေမီ Click Here 1.80 MB
23 သစ္စာ Bunny Phyo ၊ ဆိုတေး Click Here 2.00 MB
24 မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး ရဲလေး ၊ လွှမ်းပိုင် ၊ အိမ့်ချစ် ၊ Bobby Soxer Click Here 2.00 MB
25 တကယ်လဲပဲနင် မချစ်ပဲနဲ့ ချမ်းချမ်း Click Here 2.30 MB
26 လေယာဉ်ပျံ နီနီခင်ဇော် Click Here 1.80 MB
27 အားလုံးအိုကေ [ It's Ok ] လွှမ်းပိုင် Click Here 3.60 MB
28 စွယ်တော်ရွက် မနော Click Here 1.80 MB
29 စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ မနော Click Here 2.10 MB
30 ရင်ဆိုင်ကြပါစို့ ကောင်းမြတ် Click Here 1.60 MB
31 အလွမ်းများ လေးဖြူ Click Here 2.70 MB
32 ရင်ဘတ်ကလူ L လွန်းဝါ Click Here 1.90 MB
33 တစ်ချက်လေးစောင့်ငဲ့ကြည့်ဦး ဥာဏ်လင်းအောင် ၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 1.80 MB
34 အဓိပတိလမ်းကခြေရာများ ထူးအိမ်သင် Click Here 2.20 MB
35 အကြင်နာအိပ်မက် ချမ်းချမ်း Click Here 2.30 MB
36 အိပ်မက်များလား အေသင်ချိုဆွေ Click Here 1.90 MB
37 လမ်းခွဲ ဖိုးကာ Click Here 2.10 MB
38 နှလုံးသားဇာတ်ညွှန်း ကောင်းကောင်း ၊ မို့မို့လွင် Click Here 2.20 MB
39 ကမ္ဘာငယ်လေး Nine One ၊ အိမ့်ချစ် Click Here 1.80 MB
40 ချစ်သောရင်ခွင်ပျောက်သူ ထူးအိမ်သင် ၊ မဒီ Click Here 2.90 MB
41 မြတ်နိုးခွင့်လေးပေးပါ ဆိုတေး Click Here 1.60 MB
42 ကလေးဆိုးလေး ထက်ယံ Click Here 1.80 MB
43 စိတ်ကူးယဉ်အနမ်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 1.80 MB
44 အရှုပ်တော်ပုံ အေသင်ချိုဆွေ Click Here 1.90 MB
45 တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့် ဖိုးကာ Click Here 2.30 MB
46 အိန်ဂျယ် ဆိုတေး Click Here 2.50 MB
47 တစ်ဖက်သတ်အချစ် Unknown Click Here 2.00 MB
48 ခွန်အားမျှပါ R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
49 ကြယ်တွေစုံတဲ့ည ထူးအိမ်သင် Click Here 2.00 MB
50 အိပ်မက်များလား စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.00 MB
51 မိုးရယ် သားသား Click Here 2.00 MB
52 ချစ်သူလမ်းကြား အိမ့်ချစ် Click Here 2.00 MB
53 အလှဆင်လိုက်ပါ ဒီကမ္ဘာ လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
54 ပန်းခြွေသူမလာရ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
55 Ice Cream ဇေရဲ Click Here 2.00 MB
56 အမှတ်တရအနမ်း ဇေရဲ Click Here 2.00 MB
57 အဝေးရောက်နေပါသော်လည်း နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
58 ရင်မှာအရင်တိုင်း အစ္စဏီ Click Here 2.00 MB
59 Heart Breaker ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
60 ဥယျာဉ်မှူး Unknown Click Here 2.00 MB
61 ငယ်ချစ်ပုံပြင် ခိုင်ရွှေဝါ Click Here 2.00 MB
62 ကျွန်တော့်အသည်း ဆောင်းဦးလှိုင် Click Here 1.00 MB
63 Mingalar Par Me N Ma Girls Click Here 2.00 MB
64 Rain Story ပြည့်စုံ Click Here 2.00 MB
65 ဆက်ချစ်ခွင့်လေး ငဲငယ် Click Here 2.00 MB
66 Just The Way You Are Bruno Mars Click Here 2.00 MB
67 Good Time Owl City & Carly Rae Jepsen Click Here 2.00 MB
68 ငါ့အနား ဆိုတေး Click Here 2.00 MB
69 မိုး ရဲလေး Click Here 2.00 MB
70 ငိုပျော်ပြီ Me N Ma Girls Click Here 2.00 MB
71 အချစ်နွန် Me N Ma Girls Click Here 2.00 MB
72 ဘာမှားနေလဲ ဆောင်းဦးလှိုင် Click Here 2.00 MB
73 အချစ်ရဲ့ရလဒ် လင်းလင်း Click Here 2.00 MB
74 ချစ်သူမရှိတဲ့အချိန် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.00 MB
75 ဆယ်ဘဝ ရိန်မိုး ၊ စောသက် Click Here 2.00 MB
76 ချစ်နေဆဲ သလင်းဖြူ ၊ Daeorr Click Here 2.00 MB
77 ဘယ်သူ့ကိုချစ်လဲ Oasix Feat - K.Hein & Tay Za MC Click Here 2.00 MB
78 ကံကောင်းတယ် သြရသ ၊ ရတနာဖြူဖြူအောင် Click Here 2.00 MB
79 ညရဲ့လမင်း ဆောင်းဦးလှိုင် Click Here 2.00 MB
80 ချစ်ကံဆိုး နီတာ ၊ အေသင်ချိုဆွေ Click Here 2.00 MB
81 ဖေဖေမေမေ ကဗျာဘွဲ့မှူး ၊ မီးမီးခဲ Click Here 2.00 MB
82 အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်း သြရသ ၊ စောသက် Click Here 2.00 MB
83 ကြိုးပျက်သူ ဖြူဖြူကျော်သိန်း Click Here 2.00 MB
84 မင်းအချစ်တွေနဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.00 MB
85 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Me N Ma Girls Click Here 2.00 MB
86 ရာဇဝင်တွင်မယ့်ချစ်ခြင်း ကောင်းကောင်း ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
87 ပျော်ရင်ပြီးတာပဲ ဟဲလေး ၊ အစ္စဏီ ၊ ဒီယံ Click Here 2.00 MB
88 ဆုတောင်းလေးတွေပြည့်ချင်တယ် ယုန်လေး ၊ နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
89 တစ်ယောက်တည်းချစ်မယ် ဟဲလေး ၊ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်း Click Here 2.00 MB
90 ဒုတိယ စည်သူလွင် Click Here 2.00 MB
91 You Belong With Me Taylor Swift Click Here 2.00 MB
92 Just Give MeaReason Pink Click Here 2.00 MB
93 အကြင်နာသခင် ပိုးအိစံ Click Here 2.00 MB
94 မင်းတစ်ယောက်တည်း HML Click Here 2.00 MB
95 ဘာမှမလိုဘူး ပိုပို Click Here 2.00 MB
96 ပြန်တွေးကြည့် မိုးမိုး Click Here 2.00 MB
97 Beautiful Girl ဗျူဟာ Click Here 2.00 MB
98 အသက်လေးဆယ် မိုးမိုး Click Here 2.00 MB
99 နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ထက်နေခြည် Click Here 2.00 MB
100 ကျောင်းချစ်သူ အိမ့်ချစ် Click Here 2.00 MB
101 ဘယ်မှာလဲ မိစန္ဒီ Click Here 2.00 MB
102 Billionaire Travie McCoy Feat - Bruno Mars Click Here 2.00 MB
103 သက်ဝေ ဝင်းဦး ၊ တင်တင်မြ Click Here 2.00 MB
104 စိမ်းရောင်စို မာမာအေး Click Here 2.00 MB
105 ဒီကမ္ဘာမှာ ဆိုတေး Click Here 2.00 MB
106 Crazy မိစန္ဒီ Click Here 2.00 MB
107 အချစ်နဲ့အလွမ်း ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.00 MB
108 မင်း ထူးအယ်လင်း ၊ မီးမီးခဲ Click Here 2.00 MB
109 ဘေဘီပွစိ Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
110 ကျွန်တော်မြန်မာ လင်းလင်း Click Here 2.00 MB
111 မင်းနဲ့နီးဖို့ Idiots Click Here 2.00 MB
112 နတ်သက်ကြွေ Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
113 ရက်စက်မှကြေကွဲ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ သီရိဆွေ Click Here 2.00 MB
114 ကြည်ဖြူပါတော့ စိုးသူ Click Here 2.00 MB
115 ပါရမီဖြည့်ဖက် စိုင်းထီးဆိုင် Click Here 2.00 MB
116 ( V.I.P) ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
117 မဖြစ်နိုင် လွှမ်းပိုင် Click Here 2.00 MB
118 မဝေးတဲ့တစ်နေ့ Soe Gyii ft Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
119 ဇာတ်သိမ်းခန်း Jenny Click Here 2.00 MB
120 မေမေပခက်လွှဲ Unknown Click Here 2.00 MB
121 အလွမ်း ဂေးဂေး Click Here 2.00 MB
122 ကလေးရယ် လူခေတ် Click Here 2.00 MB
123 နင်ပျော်ဖို့ဆို လူခေတ် Ft Tayza MC Click Here 2.00 MB
124 ဒဏ်ရာများနဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
125 သင်ခန်းစာ J-Me ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
126 အရေးမကြီးဘူး လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
127 ဘယ်သူဖန်ဆင်းပေးတာလဲ R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
128 Let Me Kiss ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
129 ငါတို့အိမ် ဓိရာမိုရ် Click Here 2.00 MB
130 မလာပါနဲ့ မျိုးကြီး Click Here 2.00 MB
131 အသုံးမဝင်တဲ့ငါ ရဲရင့်အောင် ၊ ဇေရဲ Click Here 2.00 MB
132 သူမနှင့်အိပ်မက် Snare feat.Kyi Thar Click Here 2.00 MB
133 ငါသေလို့ရတယ် Idiot Click Here 2.00 MB
134 လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.00 MB
135 စဉ်းစား ရဲရင့်အောင် ၊ Jame Click Here 2.00 MB
136 တိတ်တခိုး ရဲလေး ၊ Bobby Soxer Click Here 1.60 MB
137 မမေ့ပါနဲ့ အောင်လ Click Here 2.00 MB
138 Born to Win Jock ၊ Zara Click Here 2.00 MB
139 ကောင်မလေး လွှမ်းပိုင် Click Here 2.00 MB
140 ထပ်တူညီတဲ့အချစ် HML ၊ Jenny Click Here 2.00 MB
141 ပြော အောင်လ Click Here 2.00 MB
142 ငါ့ထက်သာ အောင်လ Click Here 2.00 MB
143 မဖြစ်သင့်ဘူး မချစ်သင့်ဘူး Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
144 အဝေးရောက်သွားခိုက်မှာ Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
145 စာမျက်နှာ ၁၅ လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
146 အစားထိုးမရတဲ့သူ ဆောင်းဦးလှိုင် Click Here 2.00 MB
147 ပြိုလဲကြေကွဲ အေသင်ချိုဆွေ Click Here 2.00 MB
148 မငိုနဲ့ တော့ ရေမွန် (Idiots) ၊ J-me ၊ Big Y Click Here 2.00 MB
149 အချစ်များစွာယူ ထွန်းရတီ Click Here 2.00 MB
150 မုန်းတဲ့အကြောင်း မိစန္ဒီ ၊ သီရိဆွေ Click Here 2.00 MB